Dareemo - Botsify waxay kuu oggolaaneysaa inaad dhisto Facebook Messenger chatbot bilaash ah iyada oo aan wax lambar ah lagu qorin. Codsiga kaliya wuxuu ubaahan yahay xoogaa talaabooyin ah si aad uhesho bot-kaaga oo shaqeynaya. Websaydhku wuxuu sheegayaa inuu garaaci karo Chatfuel waqtiga loo baahan yahay: shan daqiiqo oo keli ah kiiska Botsify, oo ay ku jiraan jadwalka fariinta iyo Analytics. Waa lacag la’aan fariimaha aan xadidneyn; qorshayaasha qiimayaashu waxay bilaabmayaan markaad dhexgaliso barnaamijyada iyo adeegyada kale.
Chatfuel - Samee chatbot adigoon codeyn - taasi waa waxa Chatfuel kuu saamaxaya inaad sameyso. Sida laga soo xigtay websaydhka, waxaad ku bilaabi kartaa bot toddobo daqiiqo oo keliya. Shirkaddu waxay ku takhasustay soo saarista sheekooyinka loogu talagalay Facebook Messenger. Iyo waxa ugu fiican ee ku saabsan Chatfuel, ma jiraan wax kharash ah oo lagu isticmaalo.
Haddii aad haysato ilaha horumarka, waxaad sidoo kale la soo bixi kartaa sheeko-wadareedyo adiga kuu gaar ah oo adeegsanaya aalado leh farsamo-bax dabiici ah oo dabiici ah, sirdoon farsamo, iyo barashada mashiinka oo diyaar ah:
Wadahadalka - Sii dadka isticmaala siyaabo cusub oo ay kula falgalaan badeecadaada adoo dhisaya cod soo jiidasho leh iyo isweydaarsi qoraal ku saleysan oo ay ku shaqeyso AI. La xiriir isticmaaleyaasha kaaliyaha Google, Amazon Alexa, Facebook Messenger, iyo aalado iyo aalado kale oo caan ah. Dialogflow waxaa taageeray Google waxayna ku socotaa kaabayaasha Google, taas oo macnaheedu yahay inaad ku qiyaasi karto malaayiin isticmaale.
Madal Facebook Messenger - Bots for Messenger waxaa loogu talagalay qof kasta oo isku dayaya inuu dadka kula xiriiro taleefanka gacanta - iyadoo aan loo eegin sida ay u weyn tahay ama u yar tahay shirkaddaada ama fikraddaadu, ama dhibaatada aad isku deyeyso inaad xalliso. Haddii aad dhiseysid barnaamijyo ama khibradaha si aad ula wadaagto cusbooneysiinta cimilada, u xaqiijiso boos celinta hoteelka, ama u soo dir risiidhada iibsigii dhowaa, bootooyinka ayaa kuu suurta gelinaya inaad ahaato qof shaqsiyadeed, firfircoon, oo si kaamil ah u dhexmara habka aad ula macaamilayso dadka la jooga.
IBM Watson - Watson oo ku jirta IBM Cloud ayaa kuu oggolaanaysa inaad ku biiriso AI-da adduunka ugu awoodda badan arjigaaga oo aad kaydiso, tababarto oo aad ku maamusho xogtaada daruuraha ugu amniga badan.
Pandorabots - Haddii aad dooneysid inaad kuxirxirto geekaga oo aad dhisto sheeko sheekeysi ah oo u baahan codeyn yar, markaa Pandorabots 'Goobta Ciyaaraha adigaa iska leh. Waa adeeg bilaash ah oo adeegsada luuqad qoraal ah oo la yiraahdo AIML, oo ​​u taagan Luqadda Aqoonsiga Sirdoonka Cilmiga ah. In kasta oo aynaan iska dhigaynin inay tani fududahay, websaydhku wuxuu bixiyaa cashar tallaabo-tallaabo ah adoo adeegsanaya qaab-dhismeedka AIML si aad u bilowdo. Dhanka kale, haddii dhisida buugaagta lagu sheekeysto aysan ku jirin liiskaaga "wax-qabasho", Pandorabots ayaa ku jiri doona mid kuu dhis. Kala xiriir shirkadda qiimaha.
Furaha adeegsiga wax ku oolka ah ee loo yaqaan 'chatbot' waa in la hubiyo inay sare u qaadaan khibrada macaamiishaada. Midna ha dhisin maxaa yeelay waa isbeddellada kulul. Samee liistada qaababka ay uga faa'iideysan karto macaamiishaada, haddii aad ku qanacdana chatbot waxay u adeegi kartaa ujeedo waxtar leh, dib u eeg kheyraadka kor ku xusan si aad u hesho midka adiga kugu habboon.